Waa Kuwan SADDEXDA Weeraryahan Ee Ay Midkood Lasoo Saxeexan Doonto Barcelona Si Ay Ugu Buuxiso Booska Uu Ka Dhaawacmay Luis Suarez!!. - Gool24.Net
January 21, 2020 Apdihakem Omer Adem
Maamulka sarre ee kooxda Barcelona ayaa lagu soo warramayaa inay samaysteen liis ka kooban saddex weeraryahan oo ay aaminsan yihiin inay leeyihiin awooda ay ku buuxiyaan booska uu baneeyay Luis Suarez oo qaliin maray dhawaan.
Kaddib markii ay dhawaan shaqada ka direen Ernesto Valverde oo ay magacaabeen Quique Setien, Kooxda ayay ka go’antahay inay dhinaca suuqa kala iibsiga ka taageeraan tababarahooda cusub.
Barcelona ayaa haatan hoggaanka horyaalka La Liga la wadaagta Real Madrid waxaana ay madaxda kooxdaasi aaminsan yihiin in bishan January oo ay si fiican suuqa u galaan ay ka caawin karto horyaalkoodii shanaad mudo lix sano gudaheed ah.
Sida uu sheegayo wargeyska Daily Star, Saddexda weeraryahan ee liiska Blaugrana kusoo baxay midkoodna ay doonayso saxeexiisa ayaa kala ah Dani Olmo oo Dinamo Zagreb ka tirsan, Krzysztof Piatek oo Milan weerarka uga ciyaara iyo xiddigeedii hore ee Pedro Rodriguez oo Chelsea ku sugan.
Olmo oo isagu horeba uga soo najaxay akaademiga Barcelona ayaa lala xidhidhinayaa kooxaha AC Milan iyo Wolves balse waxa uu doonayaa ka ciyaarista Champions League oo ah wax ay Barcelona siin karto.
Dhinaca kale Piatek ayaa aad loola xidhiidhinayay kooxda Tottenham balse in guddoomiyaha kooxdaas ee Daniel Levy uu doonayo qiime aad u jaban inuu ku iibsado ayaan macquul ka dhigayn.
Dookha saddexaad ahna midka ugu dambeeya ayaa ah Pedro, In lala xidhiidhiyo booska Suarez ayaa ah mid yar adag sababtoo ah inuusan u goolal badnayn sidiisa balse in heshiiskiisa Blues uu dhacayo iyo xaqiiqada ah inuu Camp Nou wakhti dheer kusoo qaatay ayaa sababi karta inuu ku laabto.